Ukucoca umbulelo ononyaka kunyana wakhe evela kubazali bakhe? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ukuncoma okuchukumisayo kunyana oneminyaka ubudala evela kubazali?
Ngokuqinisekileyo umntwana akayi kuwaqonda amagama. I-IMHO, kodwa kumntwana onjalo, ukuvuyisana okushukumisayo kuya kuba yinto eqaqambileyo nenomtsalane.
Umzekelo, ndithanda iikeyiki zabantwana ezikhethekileyo kwiimveliso ezivunyiweyo zobudala (kuphela zifuna ukuyalelwa kwangaphambili). Zenziwe ngohlobo lweemasti ezinkulu okanye ngokubanzi nje ngendlela entle.
Ungathenga iibhola kwaye uzixhome kwindawo yokugcina abantwana (umzekelo, ujikeleze umntwana wakho ngeibhola ezimibalabala (kodwa hayi zikhulu kakhulu kwaye ziqaqambile, kuba umntwana unokoyika ukuvuka).
Kwaye unokwenza inombolo ukuba ithi; 1quot; ukusuka kwiibhola okanye ezinye izinto (uzive, ilaphu, iphepha ...)
Kangangonyaka senze intombi yethu enkulu yaba yiholide yosapho kwisangqa esimxinwa. Ndizenzele itafile kunye nekhekhe ngokwam, ndapheka uNapoleon, ndayihombisa ngokwenza into encinci.
Omncinci unyaka wamenyelwa kwinkampani enkulu kwaye wayalela uloliwe wokupakisha ubumnandi. Baye bonwaba abantwana.
Kwaye kwinkcitho yemibongo, ndiyakholelwa ukuba ngokwakho kuya kufuneka uqambe le migca okanye nje yiminqweno. Emva kwayo yonke loo nto, uyazi ngcono kunaye nabani na emhlabeni umntwana wakho kunye nosapho lwakho, kwaye le migca iya kuvela entliziyweni yakho kunye nobunzulu bomphefumlo wakho.
Usuku olumnandi lokuzalwa, ndiyakuhalalisela kwaye ndinqwenela ngentliziyo yam yonke ukuba ndikhule ndikhule ndingumntu onothando lweNgelosi kuwe, ukuba yonke into ebomini iya kuzaliseka konke obungakufuni, ukuba ilanga litshone emehlweni akho amnandi, ukuba ukhanyise umendo wakho ngoncumo oluvuthayo Ndinqwenela ukwamkela, bamba umhlobo wam !!! & quot; I-PS / i-ice-29quot;
Nantsi unyaka ubudala rascal!
Yonke indlu ilungile ezindlebeni zam
Abantwana bahleka kakhulu
Yiva apha nalapha!
Khawuleza, nyana wethu,
Umhlaba ufuna ukuzazi,
Uyasithanda ngamaxesha onke
Ngobusuku, emva kwemini nangokusa!
Ndicinga undixelele ukuba umntwana wakho usemncinci kakhulu. Kwaye le holide ingaphezulu kwakho. Yibhiyozele ngokufanelekileyo. Unyaka mhlawumbi wawungekho lula kwaye unengxaki, uya kukhunjulwa nguwe ngonaphakade. Tyhila umntwana kwividiyo, kwaye njengoko esakhula uya kumjonga kwaye umbonise ukuba mncinci kwaye ehlekisa kangakanani)))). Mphathe kakuhle nothando. Oku kubiza ngakumbi kuye kunalo naluphi na umboniso.
Namhlanje ngokuqinisekileyo umntwana ononyaka omnye.
Ukujikeleza kwihlabathi elimangalisayo lokufunyanwa.
Ndihlala ndikhawuleza ukuya kundinceda
Kwaye ndiyakukhumbula kwakhona ingcebiso elityelweyo.
Phakathi kokuphazamiseka kunye nokuxinana kobomi
Nika ingqalelo umntwana,
Uya kuvuna iziqhamo ezihle
Xa usenza umzamo omkhulu.
Makubekeke uncumo emntwaneni
Kwaye ulonwabo lusendleleni
Indlela iya kukhanya ngokuqaqambileyo
Sinqwenela ubomi sidlule.
Iphinde ibhalwe kwakhona ngekamva,
Weza oyena mntu ubalaseleyo emhlabeni
Ngokuthandekayo kunye nothando.
Ikati ethambileyo, eleleyo yokucoca -
Okanye i-tigress, ilungele wonke umntu ukuba acuthe iinwele,
Ndiza kuhlala nawe okungenani kancinane
Kwaye emva koko njengoko uthanda.
Akukho nto injalo, iintsomi ...
ngokuzolileyo ukuxabana kwengqondo entlokweni yam ...
Ke kunjalo kwinto yokuqala.
ukuqaqanjelwa bubuthongo ebusuku,
Apho imizuzwana engamagqabi ekwindla
Yiwa kwiintolo ezigqobhozayo ...
Ukumisa ixesha akuncedi
Kungcono uphefumle ngoku okukhoyo
Ukuziva ngathi yintlungu ehlawulweyo
Ulonwabo lwaluzele egumbini
Uqengqele esifubeni ...
Ukuze ungamoyiki ungazi.
Ubusuku be-tiptoe buhamba ngeefestile
Umntu wam ubhontsi ecaleni kwakhe.
unyaka omnye ...
Yenza ividiyo ngeefoto zabantwana kunye neevidiyo ezimfutshane. Unokongeza amagama achukumisayo kwividiyo. Hlala iibhola ezijikeleze igumbi. Umntwana oneminyaka eli-1 ubudala akadingi ikeyiki, oku kunyangwa ngabantu abadala. Kwaye ngokubanzi, umntwana akafuni mbongo, ikeyiki, okanye inani elikhulu leendwendwe. Olona lonwabo lumnandi kuye iya kuba ngamazwi akho anyanisekileyo malunga nendlela omthanda ngayo, kwaye esona sipho sigqibeleleyo kunxibelelwano lwakho, ingqalelo kunye nemood yakho elungileyo.
Usuku lokuzalwa olumnandi lomntwana!
Iholide yakho sele ifikile.
Vuya, ndoda yethu yomeleleyo.
Fumana ukukhula, amandla.
Fikelela nakuphi na ukuphakama
Usuku nosuku, iyure ngeyure.
Ngamana uthando lungahlala nawe.
Uyakhula kwaye usenze sonwabe.
Lo ngunyaka wakho wokuqala
Ungoyena ubalulekileyo kubo bonke.
Yonwaba, sithandwa sam!
Vumela unyana wakho ahleke avakalise umsindo!
Ndikhulelwe kwaye umlilo ukhanyisile entliziyweni yam -
Uthando lubambe umlilo wedwa kwaye naphakade.
Kwaye ukuthatha ipeni lakho okokuqala kwisandla sakho,
Ndaye ndaqonda ukuba ndithandana nokungakhathali.
Iintsuku bezibaleka kwaye iiyure ziqhuba
Ukhulile, mntwana wam, waba mkhulu
Kwaye ukuze singenzi okungavumiyo ukubandezeleka
Bendikhona kwaye ndiya kuba nawe ngonaphakade.
Kwaye nothando olwayikhanyisile intlantsi
Ayizukuphuma entliziyweni, ndiyazi eyona nto.
Ndikuthanda ngakumbi imihla ngemihla.
Usuku lokuzalwa olumnandi kuwe, mntwana wam, ukuhalalisela!
Ndibhala iitekisi ngohlobo lwesihobe uku-odola, kwaye ukuba unyana wakho wayeneminyaka eli-15 ukuya kweli-18 ubudala, ndiza kuwuqonda umnqweno wakho wokumnika imigca yobuqu, kwaye undikholelwe, le nyana ineminyaka ubudala ayimfuneko.
Uya kukhula, uya kufuna ukuqonda kunye nokufudumala, ukuzithemba ukuba ekhaya uya kuhlala eqondwa kwaye encediswa, kwaye yonke imigca elungiselelwe ngexesha elinje alinantsingiselo, ndixoleleni, hayi kuye, uzama uluntu.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,333.